CPC က သမိုင်းတွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အခန်းကဏ္ဍအား ရေးသွင်းလျက်ရှိကြောင်း သမ္မတ ရှီပြော - Xinhua News Agency
CPC က သမိုင်းတွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အခန်းကဏ္ဍအား ရေးသွင်းလျက်ရှိကြောင်း သမ္မတ ရှီပြော
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သမိုင်းကြောင်းတွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် ရေးသားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်အတွင်း လူသားမျိုးနွယ်၏ တိုးတက်မှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ဇွန် ၂၉ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတနှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ရှီက ပေကျင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော ပါတီဝင်များအား July 1 ဆုတံဆိပ် (July 1 Medal) ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနား၌ အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်မျိုးဆက်များသည် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနှင့် လွတ်မြောက်ရေးအတွက်၊ နိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် ခွန်အားအတွက် နှင့် ပြည်သူများ၏ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုများအတွက် ဇွဲနပဲကြီးစွာဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Xi says CPC writes splendid chapter in history
BEIJING, June 29 (Xinhua) — Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, on Tuesday said the CPC has writtenasplendid chapter in the history of the Chinese nation’s development and that of humanity’s progress over the past century.
Xi, also Chinese president and chairman of the Central Military Commission, made the remarks ataceremony held in Beijing to present the July 1 Medal to outstanding Party members.
He said generations of Chinese Communists have fought tenaciously for national independence and liberation, for prosperity and strength of the country, and for the happiness of the people. Enditem
An art performance titled “The Great Journey” is held in celebration of the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China (CPC) at the National Stadium in Beijing, capital of China, on the evening of June 28, 2021. Party and state leaders Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan joined about 20,000 people to watch the performance. (Xinhua/Ju Peng)
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ကြိမ်ရေ (၁.၂) ဘီလီယံကျော် ထိုးနှံပြီးဖြစ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွင် အသက် ၁၂ နှစ် မှ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကလေးများ မကြာမီ ပါဝင်မည်